Home / बिचित्र संसार (page 5)
असोज ७ । जर्मनीमा घर, घरमा ग्याँस मात्र होइन बिएर पनि पुर्याउने गरिन्छ । जर्मनीको सिको गरेर अन्य केही देशमले पनि आफ्ना नागरिकलाई यस्तो सुझाब दिएका छन् । जर्मनीको बियर निकै लोकप्रिय मानिन्छ । वर्षमा एक पटक विसाल बियर फेष्टिबल हुने गर्दछ ।
नियामा फेसबुक चलाउने अभिभावकहरुमध्ये सायद त्यस्ता अभिभावक नहोलान् जसले फेसबुकमा आफ्ना प्यारा सन्तानका तस्वीरहरु शेयर नगरुन् ।
वैँशले उन्मुक्त भएका हरेक युवतीहरुको सपना हुन्छ की उनको विवाह धुमधामसँग होस् । तर दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ छ हाँ महिलाहरुका लागि बिहे गर्ने कुरा निकै कठीन कार्यको रुपमा रहेको छ ।
आधुनिक युगमा समेत ६० वटी श्रीमती भएका राजा ! अझ अनौठो कुरा त के भने हरेक दिन एक देशमा खाना खाने र अर्को देशमा सुत्न जाने ।
केटा वा केटीले एक अर्कालाई मन नपराएका कारण बिहेका प्रस्ताव अस्विकार हुने गरेको त सुनिएकै थियो । तर कहिलेकाहीँ मान्छे मन पर्दापर्दै पनि कुकुर मन नपरेका कारण समेत बिहे नहुन सक्दो रहेछ ।
हिन्दीमा एउटा उखान छः उपरवाला जब भी देता हे, छप्पड फाँडकर देता हे । जब मानिसको भाग्य बदलिनु छ भने त्यो रातारात बदलिन सक्दछ । यदि आफ्नो भाग्य पनि क्षणभरमै बदलियो भने तपाइँ कत्तिको खुसी हुनुहोला ? स्कटल्याण्डमा एक दम्पत्तिको भाग्य पनि क्षणभरमै बदलिएको छ ।
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्ने एक चर्चित सन्त ज्योतिष हेरोल्ड क्याम्पिङले यो वर्षको अक्टोबर २ तारिखमा संसारको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।अक्टोबर २ को साँझ ६ बजे संसारको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनको भनाइ अनुसार त्यतिबेला संसारको २ प्रतिशत जनसंख्या तत्काल स्वर्गवासी हुनेछ भने बाँकी अन्य कुनै स्थानमा पुग्नेछन् ।
सन्त हेरोल्ड क्याम्पिङले हैटी, जापान र नेपालमा आएको भूकम्पलाई समेत यो प्रलयको पूर्व संकेतकोरुपमा दावी गरेका छन् ।नेपाली हेडलाइनकाे सहयाेगमा हेर्नुस् भिडियोः
भाद्र २७, २०७३-
भदौ २५, काठमाडौं । चन्द्रमामा पनि धेरै भूकम्प जाने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । चट्टानले बनेको साथै त्यहाँ भौगर्विक गतिविधि निकै कम हुने गरेपनि चन्द्रमामा धेरै भूकम्प जाने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । चन्द्रमामा जाने भूकम्पलाई मुनक्वेक भनेर चिनिन्छ भने त्यो ४ प्रकारका हुन्छन् । सूर्यको तापले हुने, उल्काहरुका कारण हुने भूकम्प र डिप क्वेक सामान्य हुने भएपनि स्वालो मुनक्वेक भने खतरनाक हुने गरेको छ । स्वालो मुनक्वेक ५ दशमलव ५ रेक्टर स्केलसम्मको हुने र यसको कम्पन १० मिनेटसम्म रहन सक्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् । यस्तो प्रकारको भूकम्प जाँदा चन्द्रमामा घण्टीको जस्तो आवाजसमेत निस्कने नासाले जनाएको छ । चन्द्रमामा पृथ्वीमा जस्तो सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट नभएकाले के कारणले भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा भने अध्ययनको विषय बनेको छ ।
चन्द्रमा सम्बन्धि बिशेष जानकारी
१. चन्द्रमा चिहान बनिसकेको छ
चिहान बनेको चन्द्रमा चन्द्रमालाई मानिसले अहिले पनि भगवान मानेर पूजा गर्छन् । तर चन्द्रमा चिहानको रुपमा पनि प्रयोग भएको छ । प्रख्यात भूगर्भविद् तथा खगोलविद् युजिन सुमेकरको अस्तु चन्द्रमामा विसर्जन गरिएको छ । उनले ब्रम्हाण्डको अध्ययनका लागि विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका थिए, जुन अध्ययनको सहयोगमा एपोलो यान चढेर चन्द्रमा पुग्ने मानिसको सपना पूरा भएको थियो । आफ्नो जीवनकालमा चन्द्रमा पुग्ने सुमेकरको धोको भएपनि त्यो पूरा हुन पाएन । उनको इच्छालाई पूरा गर्न सन् १९९८ मा लुनार प्रोस्पेक्टरमा उनको अस्तु चन्द्रमामा पठाइएको थियो ।
२. घातक धूलोको भण्डार
घातक धूलोको भण्डार चन्द्रमामा रहेको धुलोका कण अर्थात लुनार डस्ट निकै घातक रहेको छ । पृथ्वीमा बालुवा भएजस्तै चन्द्रमामा पनि लुनार डस्ट प्रशस्त छ । यो धुलो मैदाको पिठो जस्तै मिहीन रहेपनि निकै खस्रो रहेको चन्द्रमा पुगेका अन्तरिक्षयात्रीले बताएका छन् । यो धुलोकै कारण धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि असर परेको छ । चन्द्रमामा पुगेका अन्तरिक्षयात्रीलाई यसले मु हे फिभर समेत भएको थियो । साथै अनुसन्धान गर्न राखिएका विभिन्न उपकरणमा यस्ता धुलो पस्दा बिग्रने गरेको छ । यो धुलो गन्ध भने बारुदको जस्तै हुन्छ ।
३. चन्द्रमामा छायाँ पनि चुक घोप्टेजस्तो अँध्यारो
चन्द्रमामा छायाँ पनि चुक घोप्टेजस्तो अँध्यारो चन्द्रमामा कुनै पनि वस्तुको छायाँ पृथ्वीमा भन्दा निकै गाढा हुने गरेको छ । जब नील आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिनले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेके, उनीहरुको आफ्नै छायाँले अगाडिको बाटो अध्यारो बनाएको पाएका थिए । चन्द्रमामा वायुमण्डल नभएका कारण यस्तो भएको हो । आकाशमा सूर्य उदाएपनि छायाँ परेको ठाउँमा निस्पट्ट अन्धकार हुने हुँदा हिँड्न तथा उपकरणको मर्मत लगायत काम गर्न निकै अप्ठेरो परेको उनीहरुको अनुभव छ ।
४. डम्पिङ साइट बन्दै
डम्पिङ साइट बन्दै चन्द्रमा चन्द्रमामा मानिस पुगेको झण्डै आधा दशक पुग्न लागेको छ । यसबीचमा चन्द्रमामा फोहोर थुप्रिने क्रम पनि बढेको छ । वैज्ञानिकका अनुसार अहिले चन्द्रमामा झण्डै १ लाख ८१ हजार ४ सय ३७ किलो फोहोर थुप्रिएको छ । अन्तरिक्षयात्रीले प्रयोग गरेका सामान लगायत विभिन्न परीक्षणका काम नलाग्ने सामान चन्द्रमामा थुप्रिएको हो